Maxay yihiin aaladaha Suuqgeynta ee ugu Fiican? | Martech Zone
Khamiista, Diseembar 18, 2014 Khamiista, Diseembar 18, 2014 Douglas Karr
Fadlan jooji weydiinta tan. Waxaan ula jeedaa. Ma jiro ugu fiican. Muddada.
Waa su’aal aan si isdaba joog ah ii waydiiyo suuqleyda iyo xirfadleyda warshadaha si isku mid ah. Waa su'aal aan suurtagal ahayn in laga jawaabo mooyee haddii ay jirto qiimeyn buuxda oo shirkadda u adeegsan doonta barxadda.
Sida iibiye iibiya tikniyoolajiyada suuqgeynta, waxaan u sameynay taxadarka saxda ah shirkadaha maalgashiga, waxaan la tashanay shirkadaha tikniyoolajiyadda suuq geynta, waxaanan kala tashanay daraasiin shirkado ah qiimeynta aaladaha iibsiga.
Mid ayaa laga yaabaa inuu u maleeyo inay u fududahay sida la isu geeyo liistada muujinta ka dibna kaliya la saxo sanduuqyada ku jira shabaqleyda iibiye kasta, iyo aqoonsiga miisaaniyadda looga baahan yahay liisan kasta. Daandaansi. Taasi waa sida lagu qiimeeyo surwaalka haddii ay leeyihiin 2 lugaha surwaalka, suumanka suunka, jeebabka, iyo siibarka - ka dibna la arko inta ay ku kacayaan. Su'aalaha aan jawaabtooda la helin ayaa ah nooca midab ee surwaalku u baahan yahay inuu noqdo, halka lagu xidhayo, haddii ay u baahan yihiin qashin qallalan iyo bir, intee jeer ayaa la xidhayaa, ma waxay u baahan yihiin inay isbarbar dhigaan qaybo kale oo ka mid ah dharka.
Xaaladda macnaheedu waa suuqgeynta emaylka. Waxaan ognahay tan shirkado suuq geyn email kala duwan leh. Qaarkood waa qaali laakiin waxay bixiyaan tan adeegyo gacan qabashada ololayaashaada ah. Qaarkood waxay bilaabaan bilaash waxayna la midoobaan barnaamijyada kale ee saddexaad. Qaarkood waxay leeyihiin APIs adag oo lagu dari karo ilaha horumarinta. Qaarkood waxay leeyihiin wax soo saar emayl oo ballaaran si ay ugu diraan malaayiin emayl ilbiriqsikiiba. Qaarkood waxay leeyihiin kumanaan shey oo ay kala doortaan.
Waxay muhiim u tahay in la qiimeeyo ilaha shirkadda, xariifnimada adeegsadaha, waqtiga loo baahan yahay in la dalbado si loo hubiyo in istaraatiijiyadda si habboon loo hawlgeliyo loona fuliyo, miisaaniyadda shatiga, is-dhexgalka, hirgelinta iyo adeegsiga, iyo ugu dambeyn soo laabashada maalgashiga madal. Annagu isku talo kama soo jeedinno mid ka mid ah macmiilka ku xiga kan madal kasta - xitaa markaan xiriir iskaashi la leenahay iibiyaha.
Ahaanshaha agnostic iibiyayaashu waxay muhiim u tahay hay'addaada ama bixiyahaaga soo-saaraha si aad u siyaadin karto dib-u-soo-celinta maalgashiga iibsiga iyo istaraatiijiyada.
Taasi maaha in la yiraahdo ma jiraan barnaamijyo aan ku talineyno in ka badan kuwa kale. Dhinaca hore maaraynta maaddada, tusaale ahaan, waxaan kugula talineynaa WordPress wax ka badan aaladaha kale. Ma ahan in WordPress uu lacag la'aan yahay - maahan markii aad ku darto naqshadeynta, horumarka, habeynta iyo abuuritaanka nuxurka hirgelinta guusha. Laakiin WordPress badanaa waxay garaacdaa dhuftoyinka kale si fudud sababtoo ah xulashada ballaaran ee plugins, isku dhafka, taageerada dhinac saddexaad, martigelinta xalka, iyo xulashada mawduucyada horay loo sameeyay. Waxaa jiri kara, runtii, inay jiraan ka fiican nidaamyada maaraynta maaddooyinka si loogu fududaado isticmaalka, ugu-habboonaynta, amniga, iwm.… laakiin dabacsanaanta iyo helitaanka ilaha ayaa wali laga yaabaa inay dhaafaan go'aanka lagula talinayo madal.
Waxaan ka hadlayey qalab ku saabsan munaasabad toddobaadkan ka dhacday Smartups in Indy waana igu soo biiray Kevin Mullett iyo Julie Perry. Kevin sidoo kale wuxuu la yimid talo aad u fudud oo hadana cajiib ah of
Hadaad jeceshahay. Waad isticmaali doontaa.
Mararka qaarkood maahan xitaa dhammaan dawannada iyo foorida ama qiimaha, mararka qaarkood waa uun inaad jeceshahay isku xirnaanta adeegsadaha oo aad ku raaxeysatid adeegsiga aaladda. Haddii aad ka heshay isticmaalka madal, fursadaha ayaa ah inaad adeegsan doonto!
Maxaa ugu fiican? Dhammaan waxay kuxirantahay!
Tags: goobaha ugu fiican ee suuq geyntamadal ugu fiicantiknoolajiyada ugu fiican
elektronik sigara suuqa
Jan 3, 2015 saacadu markay ahayd 4:40 PM
Waad ku mahadsantahay macluumaadka iyo qorista….